वाईफाई वा मोबाइल डाटा स्लो भयो ? यी टिप्समार्फत घरैबाट बढाउन सकिन्छ इन्टरनेटको स्पीड - Technology Khabar
» वाईफाई वा मोबाइल डाटा स्लो भयो ? यी टिप्समार्फत घरैबाट बढाउन सकिन्छ इन्टरनेटको स्पीड
वाईफाई वा मोबाइल डाटा स्लो भयो ? यी टिप्समार्फत घरैबाट बढाउन सकिन्छ इन्टरनेटको स्पीड
जसले गर्दा यस अवधिमा इन्टरनेटको उपयोग पनि धेरै गुणा बढेको छ। प्रयोगकर्ताहरूले अनलाइन गेमिग वर्क फ्रम होम,, र मनोरन्जनका लागि स्ट्रिमिंग प्लेटफर्महरूमा भिडियोहरू हेर्नका लागि इन्टरनेटको पनि धेरै प्रयोग गरिरहेका छन्। यद्यपि, पहिलेको भन्दा धेरै इन्टरनेटको प्रयोगले पनि इन्टरनेटको अपलोड र डाउनलोड गतिमा समस्या देखिरहेको छ ।
डेस्कटप वा ल्यापटपमा इन्टरनेट गति जाँच गर्न, तपाईले वेब ब्राउजरमा जानु पर्छ र कुनै पनि स्पीड परीक्षण गर्ने वेबसाइट जस्तै स्पीडटेस्टनेट वा फास्ट डट कममा जानु पर्छ। यस पछि, तपाईं स्वचालित रूपमा डाउनलोड र अपलोड गति देख्नुहुनेछ। मोबाइलमा, तपाईं यी साइटहरू ब्राउजरमा खोल्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईं गूगल प्ले स्टोर र एप्पल एप स्टोरबाट एप्स डाउनलोड गरेर पनि परीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाइँ घरबाट काम गर्दै हुनुहुन्छ र उदाहरणकोलागि तपाईँको २ एमबीपीएस योजनाको अधिकतम गति १०० एमबीपीएस छ भने तपाईँले वर्कलोडको कारण अधिकतम गति पाउनुहुने छैन। यस्तो अवस्थामा तपाईँले ईन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र आवश्यकताअनुसार उत्तम प्लान छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईँको मोबाइल अपडेटको बेलामा पनि स्पीड घट्छ, यस्तो समयमा ब्याकग्राउण्डमा एपहरू नचलेको र यदि त्यहाँ कुनै अपडेटहरू छैनन् भने मात्र तपाईंले राम्रो स्पीड पाउनुहुनेछ।
यस बाहेक कयौं पटक डिभाइसको नेटवर्क सेटिंग्स परिवर्तन गर्दा राम्रो स्पीड दिन्छ, तपाईँ यसलाई रिसेट गर्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने उपकरणलाई रिबुट पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
गूगलको अपरेटिंग सिस्टम ‘एन्ड्रोयड क्यू’ बीटा भर्सनमा, गोपनियता र सुरक्षामा केन्द्रित
ह्वावेले आफ्नो स्मार्टफोन ब्राण्ड अनर २५ अर्ब चिनियाँ यूआनमा बिक्री गर्न सक्ने